नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन भोली,मूल उम्मेदवार को को छन् ?
काठमाडौं। हिजोदेखि सुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारण सभाको क्रममा भोली शनिबार मतदान हुने भएको छ।
महासंघको निर्वाचनमा १ हजार १ सय १६ जनाले मतदान गर्ने भएका छन् । महासंघको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मुख्य प्रतिनिधिहरुको अन्तिम सूचीअनुसार एसोसिएट्स, द्विराष्ट्रिय, वस्तुगत र जिल्ला नगरका गरी १ हजार १ सय १६ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्ने भएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारण सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित नयाँ कार्यकारी समिति निर्वाचन गदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
आगामी अध्यक्षको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेकोले अहिले निर्वाचनको मुख्य ध्यान वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केन्द्रित भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्थाअनुसार शेखर गोल्छा महासंघको आगामी अध्यक्ष बन्नेछन् ।
दुबै टिमबाट को को छन् मूल उम्मेदवार ?
चन्द्रप्रसाद ढकाल टिमबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधी तिवारी, वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उमेश लाल श्रेष्ठ र एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई मैदानमा छन् । यसैगरी किशोर प्रधान टिमबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठ र एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति छन् ।
सोलुखुम्बुमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा चालकसहित ३ जनाको मृत्यु